Ukubuyekezwa okuku-inthanethi nokwamaselula kwe Play Live Casino
Ikhaya / Amakhasino / ukubuyekezwa okuku-inthanethi nokwamaselula kwe-play live casino
Ukubuyekezwa okuku-inthanethi nokwamaselula kwe-Play Live Casino
Isofthiwe:Net Entertainment, Betsoft
Ibhonasi Lokukwamukela:I-100% ifinyelela ku-R25,000
50 i-Mijikelezo Yamahhala
Njengobufakazi bokuduma okukhulayo kwemidlalo yabathengisi bukhoma, i-Play Live Casino iyisikhungo se-iGaming saseNingizimu Afrika esizikhomba ngokuhlangenwe nakho kwangempela kwamakhasino. Kungukuhamba okuphawulekayo kumakhasino azimaketha njengezindawo zokungena. Kepha, ungalenzi iphutha ku-Play Live Casino engu-1,300 kanye nemigwaqo eqinile yemidlalo yelabhulali equkethe isabelo sebhubesi semidlalo, noma kunjalo abalandeli bemidlalo yetafula ngeke badumazeke. Ngemuva kwakho konke, iningi lamageyimu wabathengisi abukhoma aqukethe imidlalo yetafula.
Umtapo wolwazi unikezwa ibhethri lamanye ama-studios wokuqukethwe wemidlalo avelele kakhulu njenge-NetEnt, i-BetSoft, i-Play ‘N Go, i-Red Tiger, i-Playson, i-Wazdan, i-Spinomenal ne-Apollo Games, njll.Ipulatifomu yokudlala yenzelwe ubukhazikhazi bama aesthetics nobulula bokuzulazula. Idolobha elikhulu elisogwini liyakwamukela esizeni. Kuyiphuzu elingenakuphikiswa noma ngabe i-Vegas clone noma i-collage yasemadolobheni. Zonke izixhumanisi eziyinhloko zekhasino zibekwe ngokugqamile ngaphezu kwesibhengezo esikhulu sokufinyelela okuqondile.
Yaziwa njengekhasino enkulu kunazo zonke eNingizimu Afrika, i-Play Live ayinqeni ukukuletha eqenjini layo eliyinhloko ‘Ngekhasi Lethu. Ungalindela isipiliyoni sokudlala esifanelekile nesiphephile endaweni. Yonke imidlalo ihlolwa njalo futhi iqinisekiswe ngemiphumela ‘yamathuba’ nge-Random Number Generation, futhi ihlolwe yi-watchdog eCOGRA. ‘Okwenzeka ku-Play Live Stays ku-Play Live, kubhekisa ekuvikelweni kwedatha njengoba kuqinisekiswa ukusetshenziswa kwezingcingo zokubethela ezisezingeni eliphakeme ze-SSL.
2021 Amakhodi Wamabhonasi Wokwemukela e-Pinnacle Casino
Idiphozithi yokuqala-1 I-100% ibhonasi efinyelela ku-R 25,000 kanye ne-50 yemijikelezo yamahhala
Idiphozithi yesibili-2 U-50% webhonasi yomdlalo ofinyelela ku-R 12,500
Idiphozithi yesithathu-3 25% ibhonasi yomdlalo efinyelela ku-R 6,250
Funa ibhonasi yediphozi engu-1, 2, no-3 ngamakhodi MAGIC100, MAGIC50, ne-MAGIC25 ngokulandelana. Izidingo zokubheja ngama-25x, 20x, no-15x wediphozi yokuqala, yesibili, neyesithathu ngokulandelana (ibhonasi kanye nediphozithi). Amabhonasi okwamukela aphelelwa yisikhathi kungakapheli amahora angama-72 ufake isicelo.
Amakhodi Ebhonasi angadingi diphozithi e-Play Live Casino
I-Play Live Casino ayinikezeli nganoma iyiphi ibhonasi yokungafaki idiphozi okwamanje.
Okunye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Play Live Casino
Imali engenayo Ukubuyiselwa kwemali okungu-10% kokulahlekelwa kweviki eledlule
Ukwehla Kwemali Kwango Lwesihlanu Abadlali abanenhlanhla abangu-20 bathola imali engu-R 1,000 emalini yebhonasi
Imali ekhokhwayo ayinazo izibopho zokubheja, kepha ukuze ufaneleke ibhalansi yakho etholakalayo kufanele ibe ngaphansi kuka-R 100. Kufanele ngabe ufake okungenani u-R 1,000 evikini eledlule, futhi akumele kube khona ukuhoxa okulindile. Ama-Cashbacks abekwa ku-R 5,000 ngesonto.
Ukuze ufanelekele ukwehla kwemali, kufanele ubeke idiphozi okungenani engu-R 1,000 phakathi kuka-8 ntambama no-11 ebusuku ngoLwesihlanu, futhi kufanele udlale ngo-R 100 ekubhejeni okuphelele. Ukwehla kwemali kungaba ngaphansi kwezidingo zokubheja nemikhawulo yokuhoxa.
I-Play Live Casino nayo iqhuba okunye ukukhushulwa njengokuphromotha okuvamile namabhonasi amaningana wesikhashana ngasikhathi sinye. Lawa mabhonasi enzelwe isikhathi esilinganiselwe futhi azoshintsha njalo. Amabhonasi esikhashana angaziswa ekhasini lokunyusa noma angafika nge-imeyili yakho.
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku-inthanethi ku-Play Live Casino
Uma usuvele unayo i-akhawunti ku-Play Live Casino, chofoza ku- ‘Log In’ ngakwesokudla phezulu kwesikrini. Lapho ipheji livuleka, faka igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi oyikhethile ngesikhathi sokudala i-akhawunti yakho. Zonke izinketho ze-akhawunti yakho ziphezulu ngakwesokudla.
Uma ungenayo i-akhawunti, khulelaka ungavula entsha ngomzuzwana nje. Ngalesi sikhathi, chofoza ku-‘Regista ‘ngakwesokudla phezulu, bese ufaka imininingwane ebuzwe kwifomu elilodwa lokubhalisa. Thikha ibhokisi ukuqinisekisa ukuthi ungaphezu kweminyaka engu-18, yamukela imigomo nemibandela bese uyathumela.
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ungayidlala ku-Play Live Casino
Njengoba kushiwo, ungadlala imidlalo engaphezu kwe-1,300 esezingeni eliphakeme ku-Play Live kufaka phakathi ama-classic nevidiyo, imidlalo yamakhadi, ne-roulette. Impela, imidlalo ebanzi yabathengisi ebukhoma ilinde abadlali abathanda okwenzeka ekhasino langempela. Ungaphinda uhlose ama-jackpots amakhulu aqhubekayo. Ngaphandle kwezitudiyo ezishiwo kusingeniso, abanye abahlinzeki abaziwayo ku-Play Live bahlanganisa iCaleta Games, No Limit City, iGamomat, Blueprint, One Touch, iBooming Games, neFugaso, njll.
Ukudlala, ungangena kulabhulali yemidlalo ebonakalayo ngokuchofoza ku-‘Midlalo ‘phezulu ngakwesokunxele noma ku-‘Live Casino Lobby’. Umtapo wolwazi wemidlalo ebonakalayo, uhlukaniswe ngezigaba ezihlukene, okubandakanya nendawo yokwamukela izivakashi yekhasino ebukhoma. Isitudiyo ngasinye sinezindawo zaso zokwamukela izivakashi, uma uncamela noma yimuphi umhlinzeki wemidlalo. Ungapheqa ngezigaba ezahlukahlukene noma uhlunge imidlalo ethile kubha yokusesha. Ngenhlanhla, yonke imidlalo, ngaphandle kwemidlalo yabathengisi ebukhoma ingazanywa ngemodi yedemo ngaphambi kokubheja imali yangempela. Ake sibheke eminye yemidlalo eshisayo esigabeni ngasinye somdlalo:
Ama Slots Ongawobona Ngeso
Abathandi beSlots banosuku lwensimu, nsuku zonke ku-Play Live Casino. Izazi zendabuko zinokuningi kokugcwaliswa kwemishini yezithelo zakudala, kuyilapho abadlali besimanje benazo zonke izingqikithi abazithandayo, kusuka ezinganekwaneni nasezilwaneni kuya ezinganekwaneni nokwethusayo, nasebugebengwini naseMpumalanga kuya kumasiko ayimpicabadala nawopop. Ezinye izikhala esigabeni esithandwayo yiTiki Terror, Win-A-Beest, Fire Joker, Book of Dead, Lucky Lady Moon, 777 Strike, Beast of Wealth, Rocket Men, Sizzling 777 Deluxe, Mega Dragon, neWell of Wishes, njll. .
Okudala Nokusha Nokuningi
Izikhala zomuntu ngamunye zizoza zidlule, kepha izigaba zamakhasino eziyisisekelo zilapha ukuhlala. Ngaphandle kwemidlalo yamakhadi yendabuko nokuhlukahluka kwe-roulette, uzobona nezinye izinhlobo ezintsha, neminye imidlalo, engabonakali kwezinye izindawo. Zama amakhono akho nenhlanhla ezihlokweni ezifana neSuper 7 Blackjack, European Blackjack, Sic Bo Macau, High Hand Hold ‘Em Poker, Magic Poker, Lucky Spin European Roulette, neminye imidlalo efana neGold Canyon, Loot noma iBoot, Money Wheel, nokuningi .
Abekho abadlali abaningi abanenhlanhla ngokwanele yokudlala kumakhasino wangempela, okungenani hhayi kaningi ngendlela abebengathanda ngayo. Amanye ama-studio anqume ukudala imidlalo ngama-croupiers abukhoma nabadlali bakude, futhi amakhasino afana ne-Play Live anqume ukuletha le midlalo egumbini lokuphumula nasemahhovisi amalungu ayo. Ungadlala izinhlobo eziningi ezibukhoma zemidlalo yakho yamakhadi oyithandayo ne-roulette kufaka phakathi, iBlackjack, iBaccarat, iPoker, iTeen Patti, i-Andar Bahar, iDrag Tiger, neMpi Yekhasino, njll.
Hlela Izinjongo Ezicebile
I-Play Live ayinaso isigaba esizinikele sama-jackpots aqhubekayo. Kodwa-ke, iningi labahlinzeki balo bemidlalo linamanethiwekhi abanzi ezinto eziqhubekayo, ezifaka uphawu ezibalweni ezi-5 nezingu-6. Ungayihlunga le midlalo kuma-lobbies ama-studio ngamanye, noma uyihlunge kubha yokusesha. Nayi eminye inqubekela phambili efanele ukudutshulwa – E-Copa, A Night eParis, Good Girl Bad Girl, Igumbi Lomcebo, Divine Fortune, Mega Glam Life, Greedy Goblins, noMnu Vegas.
Dlala i-Live Mobile Casino: Udlala Kanjani Amakhasino Abukhoma KuSelula?
I-Play Live mobile casino kuphela inguqulo encane yesikhulumi se-PC, enokushintsha okukodwa okukhulu. Zonke izixhumanisi eziyinhloko zekhasino ngenhla kwesibhengezo esiyinhloko ziye zaqoqelwa kwimenyu ye-hamburger futhi zabekwa phezulu ngakwesokunxele kwesikrini seselula. Ngokuphathelene nokuzulazula, kunokuchofoza okungeziwe kuphela. Ngaphandle kwalokho, ikhasino ephathekayo ibukeka futhi isebenze njengenguqulo ye-PC.
I-Play Live Casino iyahambisana nezinhlelo ezinkulu zamaselula njenge-Android, iOS, Windows Phone, neBlackberry, njll. Ngakho-ke ikhasino ingafinyelelwa kuwo wonke ama-Smartphones nama-thabulet asebenza kuwo. Kodwa-ke, udinga ukuqinisekisa ukuthi umbozwe ukuxhumana okuthembekile kwewebhu ngaso sonke isikhathi, ngoba uzobe udlala ku-inthanethi, ngesikhathi sangempela.
Amageyimu weselula adlalwa kahle kumodi ye-landscape kuselula yakho, uma unikezwa ukuthambekela kwangemuva kwemidlalo eminingi. Ungadlala imidlalo eminingi kulabhulali ye-Play Live Casino usohambeni. Eminye imidlalo ekhethekile yeselula ifaka i-Lucky Lion, i-Fire Joker, i-Rainbow Jackpots, i-Wild Fireworks, i-Dragon’s Luck Megaways, i-Blackjack Multihand, i-Wild Texas, i-Zoom Roulette, ne-Speed ​​Baccarat Live, njll.
Nginga Dawuniloda i-Play Live Casino kuselula yami?
I-Play Live Casino yindawo yesimanje eku-inthanethi, enganikeli ngohlelo lokusebenza lwekhasino olulandekayo, lwama-mobiles noma ama-PC.
Izindlela Zediphozithi Nezokuhoxiswa Zemukelwa ku-Play Live Casino
Bank/Wire Transfer Cha Yebo 3-5 izinsuku zokusebenza
Visa Yebo Cha -
MasterCard Yebo Cha -
Easy EFT Yebo Cha -
I-Play Live Casino Organisation kanye nemininingwane yokuxhumana
Kusetshenziswa ngu: Hub88 International B.V. I-imeyili: Cha
Iselula: Yebo Ukuxhaswa kwe-24/7/365: Cha
Izinzuzo nezingozi ze-Play Live Casino
Top-class South Africa Casino Akukho ndawo yokwamukela izivakashi eziqhubekayo
Imidlalo engaphezu kwe-1,300 evela kuma-studio aphezulu angama-20 Amanani wamanje we-jackpot awaboniswa
Izikhala zakudala nezevidiyo, imidlalo yetafula, nemidlalo ebukhoma Zimbalwa kakhulu izinketho zokukhokha nge-e-payment
Uhlobo lokukhushulwa okujwayelekile
Ukukhethwa kwamanethiwekhi amaningi aqhubekayo
Amabhonasi ngamanani eRandi futhi adlala ku-ZAR
Amakhasino aku-inthanethi anamalayisense futhi alawulwayo
Yini Eyenza Ukudlala Amakhasino Abukhoma Kukhethe Okudumile Kwabadlali BaseNingizimu Afrika?
Indawo yaseNingizimu Afrika esezingeni eliphezulu yabantu baseNingizimu Afrika
Ilabhulali yemidlalo ecebile futhi ehlukahlukene evela ku-batter yama-studio aholayo
Iphakethe lokwamukela elikhangayo nokukhushulwa okuvamile
Ukukhethwa okukhulukazi kwemidlalo ye-Dealer ebukhoma
Abadlali bangahlose ukunqoba okukhulu kwe-jackpot
Amalungu angadlala ku-ZAR futhi athole amabhonasi eRandi
Ikhasino elibonakalayo nelilawulwayo
Dlala Izikhalazo ze-Live Casino South Africa
Ayikho indawo yokwamukela izivakashi ehlukile yama-jackpots aqhubekayo
Amanani amanje ama-jackpots awabonwa
Zimbalwa iziteshi ze-e-banking ezinikezwayo
Ingabe i-Play Live Casino esemthethweni eNingizimu Afrika?
Imithetho yokugembula eku-inthanethi emazweni amaningi isafana nokudonsa impi, futhi izimo ngazinye zingase zidide. Umthetho Kazwelonke Wokugembula wonyaka we-2004 usaphatha imidlalo ye-inthanethi eRainbow Nation, evimbela amakhasino aku-inthanethi ukuthi anikeze ngezidingo zawo kubahlali baseNingizimu Afrika. Umthetho uhlanganisa imikhakha eminingi yekhasino enikezwa yi-Play Live Casino.
Isichibiyelo esihlongozwayo sokuvumela ukugembula ku-inthanethi ngo-2008 saphikiswa ngabathintekayo abahlukahlukene, kubalwa namakhasino ezitini nodaka ezweni. I-Play Live Casino iyikhasino engaphesheya kwezilwandle nangaphesheya kwegunya laseNingizimu Afrika, kuyaqinisa idolo ukuthi iziphathimandla azibhekisi kubadlali ababodwa abadlala kumakhasino aselwandle.
Ngikhipha Kanjani Imali ku-Play Live Casino?
Okokuqala, qiniseka ukuthi awunawo amabhonasi asebenzayo. Ngemuva kwalokho, ngena ngemvume ku-akhawunti yakho bese ubhekisa ku-cashier ngokuchofoza inkinobho ethi ‘+’ ngakwesokudla phezulu ekhasini le-akhawunti yakho. Chofoza ku-‘Donsa ‘bese ufaka inani ofuna ukulikhipha. Faka igama lebhange lakho, inombolo ye-akhawunti yakho, negama lomphathi we-akhawunti. Chofoza ku-‘Donsa ‘. Uzothola okuyinhloko ukuthi isicelo sakho sokuhoxa sitholiwe futhi sizocutshungulwa ngokufanele.
Yini i-Play Live Casino?
I-Play Life Casino iyisikhungo esigcwele sesevisi se-iGaming esinikela ngemidlalo yayo yabadlali yokubheja ngemali yangempela. Amageyimu afaka izikhala, kufaka phakathi ama-jackpots aqhubekayo, amageyimu wamakhadi, i-roulette, i-video poker, nemidlalo yabathengisi ebukhoma. I-Play Live Casino isebenza ngaphansi kwelayisense evela kuHulumeni waseCuracao.
Ubani Ophethe i-Play Live Casino?
I-Play Live Casino iphethwe futhi iqhutshwa yiHub88 International B.V., okuyinkampani ebhaliswe eCuracao eZ / N Landhuis Joonchi II, eCuraçao, eNetherlands Antilles.
Ingabe i-Play Live Casino inezici zokubheja kwezemidlalo?
Cha, i-Play Live Casino inencwadi yezemidlalo.
Ingabe i-Play Live Casino inikeza uhlelo lwe-VIP?
Kukhona ezinye izinkomba zokuhlanganisa amaphuzu ezigabeni ze-akhawunti yomdlali, kepha ayikho imininingwane mayelana nohlelo lwemiklomelo noma iVIP Club kuwebhusayithi. I-Play Live iyikhasino ka-2020, ngakho-ke mhlawumbe iVIP Club isakhandiwa.
Yiziphi Izidingo Zokubheja ku-Play Live Casino?
Azikho izidingo zokubheja ezihleliwe ku-Play Live Casino. Ukudlalwa kuhluka kusuka ku-15% kuye ku-40% ngokuya ngesilinganiso sebhonasi.